Source Code (2011) | MM Movie Store
“သပွေီးတာတာငျ တိုငျးပွညျတာဝနျထမျးဆောငျနရေတာ ဂုဏျယူစရာပဲ”ဒီစကားကို သငျလကျခံပါရဲ့လား ?လှတျလပျမှုကို ဘယျအခြိနျထိ ထိနျးခြုပျထားကွမှာလဲသူတပါးဦးနှောကျကို သှငျးခငျြရာသှငျးဖကျြခငျြသလိုဖကျြ SD Card လိုသဘောထားနကွေတာဟာတရားရောဝငျရဲ့လား ?
ဒီအတှေးတှနေဲ့အတူ ရသမြိုးစုံပေးသှားမယျ့Source Code ဆိုတဲ့ဇာတျကားမှာစှယျစုံရမငျးသားကွီး Jake Gyllenhaalက ဦးဆောငျပါဝငျထားပါတယျIMDb 7.5 နဲ့ RT 91% ဆိုတော့ ပရိသတျတှအေတှကျတော့ အခြိနျပေးကွညျ့ရတာတနျမှာပါ
ဇာတျလမျးအစမှာတော့ခြီကာဂိုမွို့ပတျရထားပျေါမှာ နိုးထလာသူတဈယောကျကိုယျမသိတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျကရငျးရငျးနှီးနှီး စကားတှလောပွောကိုယျမကွားဖူးတဲ့ နာမညျနဲ့ ကိုယျ့ကိုချေါမှနျသှားကွညျ့တော့လညျး ကိုယျ့မကျြနှာမဟုတျပိုကျဆံအိတျထဲက အိုငျဒီကဒျကလညျးကိုယျ့ကဒျမဟုတျရထားပျေါကို ဘယျလိုရောကျလာတာလဲဘာရညျရှယျခကျြနဲ့ ပို့ဆောငျခံရတာလဲ
“သေပြီးတာတာင် တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာ ဂုဏ်ယူစရာပဲ”ဒီစကားကို သင်လက်ခံပါရဲ့လား ?လွတ်လပ်မှုကို ဘယ်အချိန်ထိ ထိန်းချုပ်ထားကြမှာလဲသူတပါးဦးနှောက်ကို သွင်းချင်ရာသွင်းဖျက်ချင်သလိုဖျက် SD Card လိုသဘောထားနေကြတာဟာတရားရောဝင်ရဲ့လား ?
ဒီအတွေးတွေနဲ့အတူ ရသမျိုးစုံပေးသွားမယ့်Source Code ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာစွယ်စုံရမင်းသားကြီး Jake Gyllenhaalက ဦးဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်IMDb 7.5 နဲ့ RT 91% ဆိုတော့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အချိန်ပေးကြည့်ရတာတန်မှာပါ
ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ချီကာဂိုမြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာ နိုးထလာသူတစ်ယောက်ကိုယ်မသိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကရင်းရင်းနှီးနှီး စကားတွေလာပြောကိုယ်မကြားဖူးတဲ့ နာမည်နဲ့ ကိုယ့်ကိုခေါ်မှန်သွားကြည့်တော့လည်း ကိုယ့်မျက်နှာမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက အိုင်ဒီကဒ်ကလည်းကိုယ့်ကဒ်မဟုတ်ရထားပေါ်ကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပို့ဆောင်ခံရတာလဲ